Iindlela zokuqonda ukuphela kokuzula eYurophu | Iindaba zeGajethi
Izitshixo ezi-7 zokuqonda ukuphela kokuzula eYurophu
IiVillamandos | | Umnxeba
Emva kweminyaka emininzi yengxabano phakathi kwamazwe, abaqhubi beefowuni eziphathwayo kunye Komishoni yaseYurophu, Ekugqibeleni kufikelelwe kwisivumelwano malunga nokuzula eYurophu. Abanye abasebenzisi sele benikezela ngokuzula simahla ngokupheleleyo, njengeVodafone, kodwa kude kube ngoku bayenzile ngesigqibo sabo kwaye bengazi kakuhle ukuba yeyiphi na imithetho ekufuneka beyithobele.
Ummiselo ngokubhekisele esiphelweni sokuzula eYurophu ngoku ubonakala ucacile kunakuqala kwaye ukuze wena njengomsebenzisi uyazi ukuba ulindele ntoni, namhlanje siza kukuxelela kweli nqaku Izitshixo ezi-7 zokuqonda ukuphela kokuzula eYurophu. Ewe, khumbula ukuba ukuphela kokuzulazula ngekhe kwenzeke ngokusesikweni kude kube nge-15 kaJuni ka-2017 ke lumka ngohambo lwakho kwaye ubuze umqhubi wakho malunga noku ngaphambi kokuhamba.
1 Yintoni ukuzula?
2 Ukuhambahamba kundichaphazela njani?
3 Kukuliphi ilizwe apho ndingayeka khona ukukhathazeka malunga nokuzula
4 La ngamaxabiso abhengezwe yiKhomishini yaseYurophu
5 Qaphela i-MB yenqanaba lakho
6 Ngaba ndingasebenzisa inqanaba lesiFrentshi okanye lesiPhuthukezi eSpain?
7 Izimvo ngokukhululekileyo
Ukuzula, okanye into efanayo Iyazula yiyo Umxholo osetyenziselwa ukubiza iifowuni ezithunyelweyo kunye nokufunyanwa kuthungelwano lweselfowuni ngaphandle kwendawo yenkonzo yendawo okanye kumqhubi wefowuni ephathekayo oqhele ukusinika inkonzo.
Kude kube ngoku, ezi fowuni, phakathi kwazo esinokubandakanya ukuthumela imiyalezo okanye ukubrawuza inethiwekhi, zazineendleko eziphezulu, ezithi ngamanyathelo athathwe yiKhomishini yaseYurophu ziyakunyamalala ukusukela nge-15 kaJuni yalo mngcelele.
Ukuhambahamba kundichaphazela njani?
Njengomsebenzisi, ukupheliswa kokuhambahamba kuya kukuchaphazela xa usiya kumazwe e-European Union, kunye nabanye, ukwazi ukuqhubeka nokusebenzisa inqanaba lakho leselula ngokungathi ukwilizwe lakho lokuzalwa. Ukukunika umzekelo, Ukuba eSpain unenqanaba lemizuzu engama-200 kunye ne-2 GB, xa usiya eLondon okanye uyosebenza eMilan, ungaqhubeka nokuchitha imizuzu kunye ne-GB yesivumelwano ngaphandle kwengxaki okanye iindleko.
Kukuliphi ilizwe apho ndingayeka khona ukukhathazeka malunga nokuzula
Apha ngezantsi sikubonisa amazwe apho ukuzula kuya kunyamalala ngoJuni 15, 2017;
Ngaphandle kwala mazwe, amaxabiso okuzula komsebenzisi wefowuni ophethe ikhontrakthi yenqanaba lakho aya kuhlala esebenza. kwaye kufuneka uqashe ngaphambi kokuba uhambe, ukunqanda isimanga esibi kwi-bill yakho elandelayo.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ezinye ii-opharetha, ezinje ngeVodafone, enesicwangciso sayo sokuhambahamba kwaye umzekelo bayikhuphile kulo lonke elaseMelika.
La ngamaxabiso abhengezwe yiKhomishini yaseYurophu
Kuyavakala kungaqhelekanga kodwa iKhomishini yaseYurophu kwisigqibo sayo sokugqibela ibhengeze amaxabiso okuhambahamba eYurophu, nto leyo njengomsebenzisi engayi kukuchaphazela kuba amaxabiso kuvunyelwene ngawo onke amaqela ukubuyekeza ukusetyenziswa kwale nkonzo xa sikwelinye ilizwe kweyethu.
Amaxabiso aphezulu abekiweyo € 0,032 ngomzuzu weefowuni, i- € 0,01 yemiyalezo ebhaliweyo kunye ne- € 7,7 nge-GB nganye, nangona eyokugqibela iza kuhla ngokuthe ngcembe iye kwi-2,5 euros ngo-2022.
Qaphela i-MB yenqanaba lakho
Olunye luthandabuzo olukhulu malunga nokuzula simahla ukuba abasebenzisi abaninzi banento yokwenza ne-MB yenqanaba lethu. Xa ukwilizwe langaphandle, ungasebenzisa inqanaba ledatha ongene kuyo kwilizwe lakho lokuzalwa ukuya kuthi ga kumda walo. Ukusuka ngalo mzuzu uye phambili, inkampani yakho iya kuqala ukukubhatalela i-MB oyisebenzisileyo ngaphandle kokuba ukhubaze iinkonzo ezisemsebenzini zokuqesha idatha ethe kratya.
Ngaba ndingasebenzisa inqanaba lesiFrentshi okanye lesiPhuthukezi eSpain?
Ukupheliswa kokuhambahamba kumazwe e-European Union kuphakamise imibuzo emininzi enomdla. Enye yazo kukuba singazisebenzisa na iirhafu, umzekelo isiFrentshi okanye isiPhuthukezi, kwezinye iimeko zibiza kakhulu, eSpain. Impendulo kuqala nguewe ngokwesigqibo seKhomishini yaseYurophu, nangona kwisigqibo sayo kusibeka imiqobo koku.
Kwaye iya kuba ngabaqhubi abaya kuba nakho ukwenza isigqibo sokuba umsebenzisi usebenzisa gwenxa ukuzula-zula okanye yintoni efanayo ukuba, umzekelo, wenza ukusetyenziswa okuqhubekayo kwenqanaba elivela kwelinye ilizwe, kwilizwe lakhe. Okwangoku azange zibhengezwe, yiyo nayiphi na inkampani, apho isilingi sokusetyenziswa kokuzulazula siza kusetwa kwaye ukusukela ngawuphi umzuzu apho kuya kuthathwa njengokuxhatshazwa.
Kwimeko apho umsebenzisi afumanise ukuphathwa gadalala, kufuneka azise umsebenzisi ukuba angathethelelwa ngaphakathi kweentsuku ezili-14. Ukuba oku kuzulazula kungasetyenziswanga, abaqhubi bebeya kuba simahla ukuba baqale ukuhlawulisa inkonzo ngeendleko ezongezelelweyo ze-0.04 euros ngomzuzu, i-0.01 ngeSMS nganye kunye ne-0.0085 nge-MB nganye esetyenzisiweyo.
Sijikeleze iminyaka elishumi kunye nomcimbi wokupheliswa kokuhambahamba, kwaye ngoku sele unomhla wokunyamalala kwawo, Kusenemibuzo emininzi ekufuneka isonjululwe, ngakumbi kwicala labasebenzisi beefowuni eziphathwayo, Ngubani obona ukuba liphela njani ishishini ebelijikele iminyaka emininzi kubo.
Nge-15 kaJuni, ngo-2017 ngokuqinisekileyo siyakuphuma kula manyala sinawo kwaye siza kubona, ngaphezulu kwako konke, zeziphi izigqibo ezenziwa nguMovistar okanye iOrange malunga nokuzula (umzekelo uVodafone sele ebathathile kwakudala, nangona ubona ukuba ihlala kubo okanye iyabaguqula), kuba umzekelo ndicinga ukuba abaqhubi banikwe inkululeko enkulu xa bethatha isigqibo, umzekelo, xa le nkonzo iza kuxhatshazwa.
Nguwuphi amathandabuzo onawo xa kuziwa ekuzuleni eYurophu?. Sixelele kwisithuba esibekelwe amagqabantshintshi ale posi okanye ngayo nayiphi na inethiwekhi yoluntu apho sikhona, kwaye siya kuthi sizame ukusombulula okanye okungenani sikuncede wenze njalo ngokuxhasa iselfowuni yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Izitshixo ezi-7 zokuqonda ukuphela kokuzula eYurophu
I-Instagram iya kuvumela ukulayishwa kweefoto ezininzi
Awusayi kuphinda ukwazi ukufikelela kwiGmail ngokwesiqhelo kwiWindows XP okanye kwiVista